နေလင်းအောင်: စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေဖို့ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အချက် (၉)ချက်
(English for All Magazine, October, 2013)
People’s lives become chaotic the minute they decide to be. People’s lives become happier the minute they decide to be. Be the latter. For fast-acting stress relief, slow down and consider the following:
ဘ၀ကို ပရမ်းပတာဖြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာ ပရမ်းပတာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘဝကို ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘဝဟာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာတယ်။ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။ အလျင်အမြန် သက်ရောက်နေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့နည်းစေဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
1.Know what you’re trying to achieve and why.
(၁) သင် ဘာကို ရယူချင်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် ရယူချင်တာလဲဆိုတာ သိပါ။
ဦးတည်ရာ ကင်းမဲ့ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာဟာ အချိန်မရှိတာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ဦးတည်ရာ မရှိခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းမှာ တူညီတဲ့ (၂၄)နာရီ နေ့ရက်တွေနဲ့ (၇)ရက် သီတင်းပတ်တွေ ရရှိပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရယူချင်တဲ့အချိန်တိုင်း သင့်စိတ်ကို ရှင်းလင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။ သင် ဘာကို ရယူချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့် ရယူချင်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိရှိအောင်ပြုလုပ်ပြီး အဲဒီအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ ပစ်မှတ်ကို မသိဘဲနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်အောင် မပစ်နိုင်ပါဘူး။
(၂) အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို အထူးအာရုံစိုက်ပြီး နည်းနည်းပဲ လုပ်ပါ။
လူတစ်ဦး အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက် အဓိက အချက်ကတော့ အရေးပေါ် လုပ်ရမဲ့အရာတွေထက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကိုပဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အရေးကြီးတာကိုပဲ အရင်ဆုံး ပြုလုပ်ပါ။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာတွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ ကျန်တာတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။
(၃) ပြည့်စုံဖို့ မတွေးဘဲ တိုးတက်မှုကိုပဲတွေးပါ။
သင်ဟာ ဘယ်တော့မှ မပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက် ပြည့်စုံပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်ပူပန် မနေပါနဲ့။ အဲဒီအစား သင် ပြုလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုတွေနဲ့ ဒီနေ့ သင်ပြုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေ တိုးတက်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။
တိုးတက်မှုဆိုတာ အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူတစ်ဦးရဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်မှု ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ အနစ်နာခံမှုနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းတိုင်းဟာ အမြဲတိုးတက်နေတဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ခြေလှမ်းတိုင်းဟာ ဆင်နွှဲရယူသင့်တဲ့ အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ သင်ဟာ ဘယ်တော့မှ ထိပ်ဆုံးသို့( ပြည့်စုံခြင်းသို့) မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာ သင် သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီခရီးလမ်းကို သွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီသဘောတရားက သင် တက်ရောက်ရာ ခရီးလမ်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ထပ်လောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
(၄) ညစဉ်ညတိုင်း သင့်နှလုံးသားကို သန့်စင်ပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အညစ်အကြေးတွေကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပုံမှန် သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်သလို သင့်နှလုံးသားကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လူတွေက သင့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်တယ်။ သင့်ကို စော်ကားတယ်။ သင့်ကို မေ့နေတယ်။ သင့်ကို ဥပေက္ခာပြုတယ်။ သင့်အပေါ် တက်နင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကို ငြင်းပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးတိုင်း ဒီလူတွေကို မေ့ပျောက်ပစ်ဖို့နဲ့ ဒီအရာတွေကို သွားခွင့်ပြုလိုက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်နှလုံးသားကို သန့်စင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာ အဆိုးမြင်စိတ်တွေကင်းမဲ့ပြီး လန်းဆန်းစွာ နိုးထလာပါလိမ့်မယ်။ နောင်တအဟောင်းတွေ၊ ပုံစံကျနေတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို နေ့သစ်တွေဆီ သယ်ဆောင်မသွားပါနဲ့။
(၅) မမှန်ကန်တဲ့ အတွေးတွေကို သုတ်သင်ပစ်ပါ။
သင်ဟာ နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီနည်းလမ်းကို ကြိုတင်ပြီး တွေးထားရပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ ခံစားချက်တိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မမှန်ကန်တဲ့ အတွေးတစ်ခု ရှိတယ်။ မမှန်ကန်တဲ့အတွေး မရှိခင်တုန်းက သင်ဟာ မခံစားရပေမဲ့ ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွေးဟာ မမှန်ကန်ဘူးလို့ သိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သင် ခံစားရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင့်အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဟာ သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။
(၆) စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကို မျှော်လင့်ပါ။ လက်ခံပါ။ သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါ။
အံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံး နေရာတွေဆီ ဦးတည်နေတဲ့ လမ်းခရီးတွေမှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် သင် သည်းခံရပါမယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဥယျာဉ်နှစ်ခုအကြား (သင် ရောက်နေတဲ့ ဥယျာဉ်နဲ့ သင်ရောက်လိုတဲ့ ဥယျာဉ်နှစ်ခုအကြား) တည်ရှိနေတဲ့ နံရံတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်။ သင့်ခရီးလမ်းမှာရှိတဲ့ အဲဒီနံရံကြီးကို ကုတ်တက်ရပါမယ်။ သင် တက်ရောက်နေစဉ် သင်ခန်းစာများကို စုဆောင်းရယူပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကို ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ထွက်သွားခွင့် ပြုလိုက်ပါ။ သင်ဟာ ဘယ်တော့မှ တက်မကြည့်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်တော့မှ ထွက်သွားခွင့် မပြုလိုက်တဲ့အခါမှသာ ရှုံးနိမ့်ပါလိမ့်မယ်။
(၇) သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြင်နာယုယပါ။
ကောင်းမွန်တဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး အရာဖြစ်တယ်။ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အကောင်းဆုံး ဖက်ရှင်ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး လိုက်စားခြင်းဟာ ခရီးလမ်းတစ်ခု၊ အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ရမဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု၊ ဘဝ နေထိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ တဖြည်းဖြည်း ပြုလုပ်ရမဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ ပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုက်နာ ပြုလုပ်မှုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ စိတ်ရှည်စွာ ပြုလုပ်မှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သင် သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အရှည်လျားဆုံး ခရီးလမ်းတွေဟာ အများအားဖြင့် ခြေတစ်လှမ်းနဲ့ အစပြုရပါတယ်။ ဒီခရီးလမ်းတစ်ခုလုံး ပြီးမြောက်ဖို့ဆိုတာ တစ်နေ့မှာ နည်းနည်းချင်း လျှောက်လှမ်းရသလို နေ့စဉ်နေတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း နာရီဝက်ကနေ တစ်နာရီအထိ အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ပါ။ အစာအာဟာရကိုလည်း မျှတအောင် စားပါ။
So treat yourself every day. Give yourself something special – like laughter, good conversation, meditation, quiet reading, an hour to work onapassion,along walk, etc. You are worth it.
(၈) နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင့်အတွက် ကောင်းတဲ့အရာ တစ်ခုခု ပြုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဦးစားပေးစာရင်းထဲမှာ သင့်ကိုယ်သင် ထိပ်ဆုံးက ထားပါ။ သင့်ရဲ့ ကြင်နာမှု၊ အာရုံစိုက်မှုကို သင့်ထက်ပိုပြီး ထိုက်တန်တဲ့ လူတစ်ဦးဦး ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိပါဘူး။ သင့်ကိုသင် အရင်ဆုံး ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အခါ အခြားအရာအားလုံး နေသားတကျ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မိမိကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြုစုပါ။ ရယ်မောခြင်း၊ လူကောင်းသူကောင်းနဲ့ စကားပြောခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာ စာဖတ်ခြင်း၊ တစ်နာရီလောက် ဝါသနာပါရာ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခရီးရှည် လမ်းလျှောက်ခြင်းစတဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ပါ။ သင်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိုက်တန်ပါတယ်။
စုစည်းပါ။ သောက မပွားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ နေရာကို စနစ်တကျ စီစဉ်ပြီး သင့်ရဲ့ အချိန်စာရင်းကို စာအုပ်ထဲ ရေးမှတ်ပါ။ ခြေချဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခု၊ အမှားနည်းစေမဲ့ နေရာတစ်ခု၊ စဉ်းစားတွေးတော အသက်ရှုဖို့ အခန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ ဒါဆိုရင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေဖို့ သင်ဟာ အလိုက်သင့် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
Posted by နေလင်းအောင် at 5:50 PM